Chitoro chako chepamhepo chakagadzirira mushandirapamwe weKisimusi? | ECommerce nhau
Chitoro chako chepamhepo chakagadzirira mushandirapamwe weKisimusi?
La Krisimasi iyo chaiyo litmus bvunzo ye online store. Panguva ino, huwandu hwemaodha hunowedzera, pamwe nezvinodiwa nevatengi.
Kusarudzwa kweye yakanaka yekuendesa sevhisi, fungidziro yemastock, kumhanya kana zvasvika pakushandira maodha kana kupindura mibvunzo ndidzo dzimwe nyaya dzinoisa vatengi mukutarisa. eCommerce paKisimusi kupfuura chero nguva ipi zvayo yegore.
Jason miller, Chief Trade Strategist we Akamai, mutungamiri wepasirese muCDN (Zvemukati Zvekuunze Network) masevhisi, anopa mamwe matipi kuitira kuti zvitoro zvepamhepo zvigadzirire kubudirira kugadzirisa wave inotevera yekutenga zororo.
Matipi ekuyedza kuramba uye kushushikana kwechitoro chepamhepo kuona kuti yakagadzirira mushandirapamwe weKisimusi
Miller anotsanangura izvozvo traffic spikes Zvinokonzerwa nekutengesa kwemwenje kana zvigadzirwa zvitsva zvinogona kuve zvinonetsa kune vazhinji vatengesi munguva yezororo. Kugadzirira mawebhusaiti kuti atsungirire ma spikes akadaro mumigwagwa kunogona kukanganisa maitiro emari. Kukwanisa kwewebhusaiti kuburitsa ruzivo rwevatengi kunogona kuvimba nenzvimbo nhatu dzakakosha: zvivakwa, kodhi yekushandisa, uye marongero eCDN.
"Kunyangwe kuchine mavhiki mashoma ekuti usvike paKisimusi, ino ndiyo nguva yakaringana yekuita muyero wehuremu wepamusoro pechikamu kuti uone kuti vashandisi vangani kana kuti ingani traffic inotakura webhusaiti yedu inogona kubata vasati vatadza kupindura"anotsanangura Miller. "Munyika yakakwana, mutengesi wega wega angave nenzvimbo yekuyedza iyo ingatarise nharaunda yavo yekugadzira kuti vaite bvunzo iyi, asi handizvo zvazviri kune vazhinji vavo." Nechikonzero ichi, Miller anokurudzira kuti chinhu chekutanga kuita kuyedza nharaunda yako yekugadzira ndeyekuti uve nechokwadi chekuti wakabatana neIT, data Center uye maCDN zvikwata zvisati zvaitika uye panguva yekuyedza kudzivirira chero kukanganiswa kune traffic inogadzirwa nevatengi. Pasina kuwirirana kwakaringana, iwe unogona kutungamira kune Yakagovaniswa Kuramba Kwebasa (DDoS) pane yako webhusaiti.
Kana kuyedza kwaitwa pane saiti, inofanirwa kuitwa nemapatani ayo vashandisi chaivo vaizoshandisa kuwana saiti. Izvi ndizvo zvimwe matipi akakosha ekuyedza webhusaiti:
Shandisa mashandisiro emapatani kubva ku analytics kugadzira kuyerera kuburikidza saiti kubva pachigadzirwa kufamba, wedzera kungoro uye Checkout.
Isa analytics kutsanangura matunhu akajairika uye nekumhanyisa mhanyisa inoonekwa nevashandisi kuwana kuongororwa chaiko.
Panguva ye verenga inotarisirwa traffic traffic yewebhu webhusaiti, zvinotevera zvinotevera zvinofanirwa kutariswa: mwero we traffic kubva makore apfuura; yemberi yekushambadzira mishandirapamwe pamwe nekuwedzera gumi kusvika gumi muzana muzana kuvhara nzira dzisingatarisirwi dzemigwagwa. Iyo inotevera yekutarisa uye mhedzisiro zvinobatsira kuti unzwisise kana iyo webhusaiti dhizaini yakanyatso kuenzana kune inotarisirwa mutoro
Kuongorora Hardwaree inogona kufumura matambudziko neCPU, disk uye yekushandisa ndangariro pamwe nekubatana pakati pemaseva e database.
Tarisa tarisiro yega yega yekutadza izvo zvinogona kukonzera zvakakomba mashandiro ekuita senge ma routers, firewalls, uye zvemukati proxy masevhisi.
Unogona kushandisa iyo kuongorora kushanda kuti uwane marefu ekukumbira kukumbira, kuita zvakanyanya, uye kuti mangani mafoni paminiti iyo application inogona kubata.
La CDN kugadzirisa ndiyo kiyi yekuburitsa traffic kubva kune iyo sosi yezvivakwa kumucheto kweInternet. Cache chinhu uye marongero enguva anogona kubvumidza inosvika zana muzana yezvinhu zvimisikidzo kuburitswa uye zvinoshamisa kudzora mutoro wehurongwa. Dynamic saiti yekumhanyisa uye inoshandura mufananidzo compression inogona kushandiswa kugadzirisa nekukurumidza kuchinjisa zvemukati (senge zvemunhu) uye gadzirisa mufananidzo compression kubatsira kukwirisa iyo yakawanda-kifaa chiitiko.
Tarisa kuti vanopa vanogona kubata iro rekuwedzera mutoro. Kana kuyedza kana kupa varidzi vemunhu vasingakwanise kutevedzera zvikumbiro zvevatengi, pane njodzi yekuti mapeji asina chinhu kana zvemukati zvisina kukwana zvinoratidzwa. Zvakatoipisisa, mamwe matatu-bato mateki anogona kudzikisira saiti kana kuvharira iyo peji rese kana ma tag asina kuitiswa nemazvo uye achikutadzisa iwe kushandisa asynchronous mafoni. Tag manejimendi mhinduro dzinogona kubatsira kuongorora kune idzi nyaya, pamwe nekudzima zvisina hunhu ma tag pasina kuita kodhi-nhanho shanduko kune webhusaiti.
Pamusoro pekuwedzera kwevatengi traffic, liye Krisimasi mwaka unowedzera kuwedzera kwakanyanya kwekurwisa traffic. Miller anoyeuka kuti gore rapfuura musi weChishanu Chishanu, Akamai Smart Platform yakaona kuwedzera kwakapetwa kaviri nehafu munhamba yekurwiswa kana ichienzaniswa neChishanu chapfuura. Saizvozvowo, pakave nekuwedzera kwehuwandu hwekurwiswa kweDDoS kutora bitcoin (kuti uwane rumwe ruzivo nezverudzi urwu rwekurwisa, tinya pano). Naizvozvo, pakuyedza webhusaiti, zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti une rakasimba gore-based web application firewall uye DDoS yekudzora chikuva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Chitoro chako chepamhepo chakagadzirira mushandirapamwe weKisimusi?